Somaliland:- Walaac laga muujiyay gabdho loo xiray calanka Soomaaliya | Gaaroodi News
Somaliland:- Walaac laga muujiyay gabdho loo xiray calanka Soomaaliya
Xafiiska Xuquuqul aadanaha ee Jamhuuriyada Somaliland ayaa walaac ka muujiyey xaaladda 35 gabdhood oo loo xiray calanka Soomaaliya oo ay wateen 26 bisha June oo ku aadnayd markii ay xorriyadda qaateen gobollada waqooyi.
Booliska Somaliland ayaa horay u xaqiijiyay in ciidaanka boolliska Gobolka Awdal ay xabsiga u taxaabeen ku dhawaad kontan dhallinyaro(50) ah kuwaas oo la soo baxay calanka Soomaalya.
Dhalinyaradan ayaa xilligii la qabtay qaarkood ku labisnayeen calanka halka kuwa kalana muqaalo iyo sawiro ay ku galayeen meel ka baxsan magaalada Boorama.
Dhalinyaradan ayaa hadda ku kala xiran xabsiyada Somaliland waxaana la hor gayn doonaa maxkamadda iyo xeer ilaalinta si ay uga gutaan waajibaadkoga, sida ay sheegeen booliska Somaliland.
Balse warbixin ka soo baxday Xafiiska Xuquuqul Aadanaha ee Jamhuuriyadda Iskeed Madax-banaanida ugu Dhawaaqday ee Somaliland oo booqasho ugu tagay gabdhahan oo laga soo qabtay magaalada Boorama ayaa walaac ka muujiyey xaaladda ay ku suganyihiin.
Komishanka ayaa walaac ka muujiyay in gabdhaha xabsiga ku jira qaar ka mid ah ku jireen xilliga imtaxaanaadka ee Jaamacadaha. Waxayna sidoo kale cabasho ka muujiyeen goobaha ay gabdhaha seexdan ah ku xiran yihiin oo ciriiri ah. Haweenay sidata calanka Soomaaliya
Xafiiska ayaa sidoo kale qoraalka ku sheegay in gabdhaha ay hadda ku xiran yihiin xabsiga magaalada Gabilay, waxayna tiradooda gaaraysaa 35 iyada oo aan ilaa hadda la maxkamadaynin.
“Hablahan oo tiradoodu tahay 35 gabdhood ayaa 26 June laga soo qabtay magaalada Boorama ee gobolka Awdal iyaga oo lagu soo xiray inay xirnaayeen calanka Soomaaliya. Ilaa hadda aan la maxkamadaynin.” ayaa lagu yiri warbixinta ay soo saareen komishanka xuquuqal Aaadanaha ee Somaliland.
Xubnaha ka socday Komishanka ayaa sheegay inay waraysi la yeesheen gabdhaha xiran oo ay u xaqiijiyeen in si wanaagsan ula dhaqmeen ciidamada kala duwan ee gacanta ku haya iyaga oo sidoo kale sheegay in aanay jirin wax xadgudub ah oo ay ciidanku kula kaceen muddadii ay xabsiga ku jireen.
Komishanka ayaa hay’addaha ay khusayso arrintan ugu baaqday inay gabdhaha maxaabiista ah “sida ugu dhakhsiyaha badan kiiska uso gabagabeysaan si ay u helaan xuquuqdooda cadaaladeed.”
Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID, Faysal Cali Waraabe, ayaa waraysi uu shalay siiyay telefishinka Horn Cable waxa uu Jamhuuriyadda Iskeed Madax-banaanida ugu Dhawaaqday ee Somaliland ka codsaday in qofkii lagu arko isaga oo xiran ama wato calanka Soomaaliya xeer ama sharci laga soo saaro.
“Dowladda waxaan ka rabnaa calanka Soomaaliya qofkii qabto waa in sharci laga soo saaro, waa in xeer la soo saara cinqaabteeda ku cadahay maxaa yeelay way nagu diganayeen”. Ayuu yiri Faysal Cali Waraabe, Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID